ရန်လင်းအောင် – ညတွန်းလှည်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ရန်လင်းအောင် – ညတွန်းလှည်း
မီးရောင်ကြည့်ပြီး လူးလွန့်နေရတယ် ။
ပွဲတော်ဦးတည့်ရာ ဘီးလှိမ့်ရတာပဲ ။
သွေးဆောင်ခေါ်လာမယ်ပေါ့။
ကိုယ့်လမ်းထဲ ဘယ်လာလင်းမလဲ ။
ညတွန်းလှည်းလေး … … …
ညတံတားပေါ်တွန်းပြန်ခဲ့တယ် … …
၁၄ . ၂. ၂၀၁၆